ဒီနည်းတော့ သူများတွေရေးထားတာလည်း တွေ့ပါတယ် ။ မသိသေးတဲ့သူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးပေးလိုက်ပါတယ် ။ Gmail ဝင်ရုံနဲ့ Facebook ကိုလည်း ဝင်နိုင်တာမို့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်တယ်ဆိုလို့ ဆိုလို့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Facebook သုံးသူတွင်း လုပ်ထားသင့်ပါတယ် ။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ်ဗျာ ။ ဒါကြောင့် အသေးစိတ် မရေးတော့ပါဘူး ။ ပြည့်စုံအောင်တော့ ညွန်ကြားပေးမှာပါ ။
လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Gmail ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Mail Settings ကို ဝင်ပါ ။ Account Settings မဟုတ်ပါ ။ အပေါ်ပိုင်းနားက နာမည်နဲ့ Settings ကို တွေမှာ နိပ်ကြည့်ပါ ။ Mail Settings ဆိုတဲ့ စာသားတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ပြီးရင် အဲဒီ Mail Settings က Gadgets ကို နိပ်လိုက်ပါ ။ အပေါ်နားက ခေါ်စဉ်တွေထဲက တစ်ခုပါ ။
အဲဒီမှာ URL ထည့်ဖို့ နေရာတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီမှာ ဒါတွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ ။
ပြီးရင်တော့ F5 ကို တစ်ချက်နိပ်ပေးလိုက်ပါ ။
ခုဆိုရင်တော့ Gmail မှာ Facebook သုံးဖို့ Facebook ရောက်နေပါပြီ...
လုပ်စရာတွေနည်းနည်းကျန်သေးတယ် ။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ...
အဲဒီမှာ Facebook Account နဲ့ ဝင်လိုက် ။ ပြီးပြီဗျာ ... အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...
Posted by P Kyaw Swa at 4:52 PM
iPhone, iPad, iPod Touch တို့ တွင် iTunes မလိုဘဲ Music သွင်းနည်း
RFF: မြန်မာ Mobile Application Store
iTunes နဲ့ Music တွေ Sync လုပ်ရတာ စိတ်ပျက်နေသူတွေ အတွက် Pwn Tunes ဆိုတာလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Pwn Tunes ကိုသုံးဖို့ အတွက် သင့်ရဲ့iDevice ဟာ Jailbreak လုပ်ထားရပါမယ်။ Pwn Tunes က Cyida App လေးတစ်ခုပါ။ Cyida ထဲမှာ Pwn Tunes လို့ ရှာပြီး ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်။ Cydia ကနေ ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကနေ mediafire မှာ .deb file တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ .deb file ကို iDevice ထဲမှာ ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ အရင်ပြောပြပါမယ်။ တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေလဲ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒီမှာတော့ iPhone Explorer နဲ့ ပဲ လုပ်ပြထားတယ်။
iPhone Explorer နဲ့Deb file ကို အောက်က Link မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
Download iPhone Explorer
iPhone Explorer ကိုဖွင့်ပြီး Zin Ko Oo/Root Directory/var/root/Media/Cydia/AutoInstall အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလိုက်ပါ။
Zin Ko Oo နေရာမှာတော့ ကိုယ့် iDevice Name ပေါ့..
အဲဒီလမ်းကြောင်းထဲကနေ AutoInstall Folder ထဲကို ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ PwnTunes.deb file လေး ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် iDevice ကို reboot လုပ်လိုက်ပါ။ reboot လုပ်ပြီးရင်တော့ PwnTunes ကို install လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
ပြီးရင် မိမိ iDevice ထဲတွင် Settings >> PwnTunes >> Generate Playlists နဲ့Needs Sync ကို On ထားလိုက်ပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 4:44 PM
Creating an iTunes App Store account withoutacredit card (2)
Creating an account on iPhone, iPad, and iPod touch
If you already have an account, choose Settings > Store. Tap the Apple ID displayed and choose Sign Out.
Choose your country, then tap Done.
You'll need to read and agree to the iTunes Store Terms & Conditions. Tap Agree located at the bottom of the page to continue.
Enter your email address, security question, birthday, and create your password. Tap Next.
Select None as your payment option.
Continue to fill out the required email, address, and phone number fields. Tap Next.
You'll then seeascreen that says "Verify your Account." Tap Done and check your email foraverification email from iTunes Store.
Open the email and click the link enclosed in the email to activate your account.
Once you tap the link, the App Store should automatically open and then prompt you to sign in with your account name and password.
Tap Sign In and you will seeathank you screen.
You have set up your account successfully and you can start enjoying iTunes, iBooks, and the App Store on your iPhone, iPad, and iPod touch.
Posted by P Kyaw Swa at 4:11 PM
ကျနော်တို့ Credit ကတ်မလို တဲ့Free iTunes Account တစ်ခုလောက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းသာတစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ကြည့်ပါ...အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ..
iPhone / iPad Touch ရှိကြတဲ့ သူတော်တော်များများမှာ iTunes Account မရှိသည့်အတွက် Apple က ပေးတဲ့ Free Application တွေကို Install မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး....iTunes Account ကလဲ Credit ကတ် ရှိထားမှာ သာလျှင်အဆင်ပြေတာကိုးဗျ..အခုတော့ကျနော်တို့ Free iTunes Account တစ်ခုလောက်ဖွင့်ကြရအောင်ဗျာ...
ဖတ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ အတွက် မြန်မာလိုမရေးတော့ပါဘူး...
1. iTunes ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
(United States ကိုသာရွေးပါ၊ တခြားနုိုင်ငံဆိုမရပါဘူး)
4. Click on any FREE Application and Download it by Clicking on Free as Shown in the Pic above :
Posted by P Kyaw Swa at 4:05 PM
Best free Windows Software အစုံအလင်စုစည်းဖော်ပြပေးခြင်း
posted by: အမျိုးကောင်းသား
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေချင်တာကတော့ free software တွေကို အစုံလင်တစ်ခါတည်းရှာဖွေပြီး မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်
သူငယ်ချင်းတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆို၇င် ကျွန်တော်အမျိုးကောင်းသား ရှာဖွေရကျိုးနပ်ပါတယ်ဗျာ
Lightweight and solid. Good ratings. Worth looking into.
Posted by P Kyaw Swa at 9:27 AM
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ…Memory Stick တွေမှာ ကြုံတတ်တဲ့ပြသာနာလေးတွေဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေးပြောပြမှာပါ…သိပြိးသားဆိုလဲ သည်းခံပြီးဆက်ဖတ်ပေတော့..ဟီးး :D သူငယ်ချင်းတို့ ကြုံဖူးကြမှာပါ…Memory Stick ထိုးလိုက်တာနဲ့ …Autorun.inf တို့Recycled.exe တို့Rundll32.exe တို့ ..ဘာတို့ ညာတို့ ပေါ့…အဲဒီ virus တွေကို USB Disk Security မှာလာပြတယ်လေ…အဲဒါတွေကို အရမ်းရမ်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့..Kasper ကတောင် မဖျက်နိုင်ဘူး… USB Disk Security မှာ Delete လုပ်လဲ တစ်ချို့ဟာတွေကို delete လုပ်လို့ မရပါဘူး……အဲဒီတော့ ဘာ software မှ သုံးစရာမလိုတဲ့ ကျွန်တော်ပေးတဲ့ နည်းလေး သုံးကြည့်လိုက်..ရှိသမျှ virus တွေ အကုန်သေသွားစေရမယ်..(ဟဲဟဲ..ငါကွ…Kasper လောက်တော့သနားတယ်….ဟီးးး :D).. ကျွန်တော့်ရဲ့virus ရှင်းတဲ့နည်းက တစ်ခြားထွေထွေထူးထူး ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး…. Bat file နဲ့command တွေရေးပြီးရှင်းတဲ့နည်းလေးပါ…..ပထမဦး ဆုံး Notepad တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ…ပြီးရင် အောက်မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ command တွေကို copy ကူးထည့်လိုက်ပါ… @echo del: E:Autorun.inf del: F:Autorun.inf del: G:Autorun.inf del: H:Autorun.inf del: E:Recycled.exe del: F:Recycled.exe del: G:Recycled.exe del: H:Recycled.exe del: E:RUNDLL32.exe del: F:RUNDLL32.exe del: G:RUNDLL32.exe del: H:RUNDLL32.exe @echo ပြီးရင်တော့.. နာမည်တစ်ခုခု.bat (eg. Kill.bat) ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick ထဲမှာ Save လိုက်ပါ…အဲဒီ Kill.bat ဆိုတဲ့ file လေးကိုတော့ မဖျက်ပစ်လိုက်နဲ့နော်…Stick ထိုးတိုင်း အဲဒီ file လေးကို double click လုပ်ပြီး run လိုက်ပေါ့…ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick ထဲက virus တွေအကုန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်……
Posted by P Kyaw Swa at 3:44 AM
gmail ကိုဟက်လို့တကယ်ရပါသလား။ရပါတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ gmail ဟက်ခံရတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ကိုယ့်အမှားက 90% ပါ ၀င်ပါတယ်။ ဒီပို့က ကျွန်တော်ဗဟုသုတနေနဲ့ တင်ပြတာပါ။မသိသေးတဲသူတွေအတွက်ဆောင် ရန်ရှောင်ရန် အတွက်ပါ။ကျွန်တော်နည်းကတော့ 99% အလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ်နပ်မှကိုယ်ရမှာပါ။
gmail hacking လုပ်မယ်ဆိုရင်
ဒီထဲမှာ အသုံးအများဆုံးကတော့ Phishing method ဖြစ်ပါတယ်။
Phishing method ဆိုတာ gmail login page အတုလုပ်တာပါ။
အောက်ပါလင့်နေ gmail phisher လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 3:36 AM
(အစ်ကိုရေ… ဆက်ပြောပါဦးဗျ။ ဟက်ကင်း တစ်ပ်စ် လေးတွေ။) (လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဟက်ကင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်နည်းက ၂ မျိုးပဲရှိတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်တိုက်မလား၊ အပြီးတိုင်တိုက်မလား။ ၂ ခုစလုံးရဲ့နောက်က အီလောထရွန်းနစ်ပုဒ်မနဲ့ငြိတဲ့အတွက် အနည်းဆုံး ၇ နှစ်ကနေ ၁၅ နှစ်ထိထောင်ထဲမှာ နေရမယ်။ ဟက်တော့မယ် ဆိုရင် အဓိကကတော့ အင်တာနက်ကို ၂၄ နာရီ သုံးနိုင်ရမယ်) (ပြေပြေပြစ်ပြစ်လေး ရှင်းပါဦးဗျ။) (ဒီလိုဗျာ…အင်တာနက်လောကမှာ တိုက်နည်းပေါင်းစုံရှိတယ်။ ဟက်နည်းပေါင်းစုံရှိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတာတော့ မတူဘူး..အားသန်ရာသန်ရာပေါ့။ ) (အဆင်အပြေဆုံးက ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအစ်ကို။) (စိတ်ဝင်စားစရာတွေကတော့ အားလုံးပဲ…သူများဟာကိုလုပ်ရတာ ဆိုတော့ ဖီးလ်ကလည်းအပြည့်ပဲ။ တိုက်နည်းတွေကဗျာ….PC to PC ထိုးဖောက်တာရယ် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေကိုထိုးဖောက်တာရယ် ဆာဗာတွေကိုထိုးဖောက်တာရယ်ပေါ့။) (အင်း… တစ်ခုလောက် ပြောပြပါဦး။) (အင်တာနက်ဆာဗာတွေနဲ့ ဆိုက်တွေကို တိုက်တာကို အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်။) (အလွယ်ဆုံးကတော့DDoS လို့ခေါ်တဲ့ Denial လုပ်တဲ့ တိုက်နည်းပေါ့။ ဒီကောင်က ဆိုက်ကို အကြိမ်များစွာ အလုပ်ပေးပြီး Server ကို ဒေါင်းသွားစေတဲ့နည်းပေါ့။ ဒါကတော့ ကြားဖုးပြီးဖြစ်မှာပါ။ လုပ်နည်းကိုင်နည်းကလည်း တော်တော်ကို လွယ်ပါတယ်။) (အင်း.. စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပြီ။) (Ready Made Tools တွေသုံးပြီး တိုက်မလား။ Command နဲ့တိုက်မလား၊ ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ) (ကန့်သတ်ချက်က ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ) (………..com လိုဟာကို တိုက်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ကွန်ပြူတာ ၄ လုံးလိုတယ်။) (ကိုယ်တိုက်ချင်တဲ့ IP ကိုရိုက်ထည့် ပြီးရင် ကွန်ပြူတာ ၄ လုံးစလုံးကနေ ပြိုင်တူ Ready Made Tools တွေကို Run လိုက်ရုံပဲ။ ၄ နာရီလောက် တီးထည့်လိုက်ရင် အဲဒီ ဆိုက်ကိုထိုင်ထားတဲ့ Server ဒေါင်းတာပဲ) (ဒါကအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောတာပါ။ ) (တစ်ယောက်တည်း တိုက်လို့ရနိုင်မယ့် နည်းကရော နောက်ပြီး Ready Made Tools တွေကိုရော ဘယ်က ရနိုင်လဲ အစ်ကို။ ) (Tools တွေက ဂူးဂဲမှာ အလွယ်တကူရှာနိုင်တယ်. ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကတော့ Help ဖိုင်တွေမှာ ပါတယ်။ သုံးရတာကလွယ်တယ်။ သို့သော်….) (….com ဆိုက်ကို တိုက်လိုက်လို့ Trace ပြန်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်လို ရှောင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားထားရမယ်။ ဘယ်ဟာကို တိုက်တိုက်ပေါ့။) (Trace မမိအောင် ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ ဒါက Tools တွေရဲ့ အားနည်ချက်ပဲ။) (အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့က Tools တွေမသုံးဘူး) (ကျနော်တို့က Zoombie တွေမွေးထားတယ်။ ဒီကောင်တွေက Bot တွေပေါ့။ ဒါကတယောက်ထဲလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့။ ) (ရှင်းပါဦး အစ်ကို အဲဒါ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်) (အဲဒီ Bot တွေကို သုံးပြီး Mirc ကနေတစ်ဆင့် တိုက်တယ်။ MIrc channel တွေမှာ Bot က သူခိုင်းလို့ရမယ့် Victim တွေကို ရှာတယ်။ ဥပမာဗျာ.. ကျနော်က MIRC ထဲကို ၀င်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ Bot က ကျနော့်ကိုဆက်သွယ်လာတယ်။ ကျနော်က bot ကို ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီင်္မှာ Bot က သူခိုင်းလို့ရမယ့် စက်တွေကိုလိုက်ရှာတယ်။ အဲဒီမှာ အနည်းဆုံးစက် ၁၅၀ လောက်ကိုရပြီဆိုရင် Target ကို တိုက်ခိုင်းတာပဲ။ ဒီနည်းက အန္တရာယ်အကင်းဆုံးပဲ။ Bot ဆိုတာ PHP နဲ့ရေးထားတဲ့ အကောင်ပဲ။ အဲဒီကောင်ထဲမှာ ကျနော့် IP ထည့်ပေးထားတယ်။ ပြီးရင် ကျနော့်ရဲ့ MIRC channel ပေးထားတယ်။ ကျနော် အွန်လိုင်းတက်ရင် ဒီကောင်က အလိုလို ဆက်သွယ်တယ်။ Bot တွေကတော့ အွန်လိုင်းမှာ ၀ယ်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးနိုင်ရင်လည်းရေးပေါ့။ DDOS နည်းကတော့ ကျနော်သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ) (ဟုတ်ပြီ။ ဆက်ပါဦး။) (DDOS ကို Anti လုပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေရှိတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ IP တစ်ခုတည်းကနေ Request လုပ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်များလာပြီဆိုရင် Drop လုပ်ပစ်တယ်။ DDOS ဆိုတာက ပထမဆုံး Target ကို Request လုပ်တယ်။ Target က response ပြန်ပေးတယ်။ ၁ မိနစ်အတွင်းမှာ အကြိမ် ပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး အဲဒီလိုလုပ်နေကြတာပေါ့။) (သာမန်ဆိုက်တစ်ခုဆိုရင်တော့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။) (Anti ထည့်ထားကောင်ကျတော့ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြိမ်ထက်များလာရင် ဒါ DDoS ဆိုပြီး Drop လုပ်ပစ်တာ။) (DDOS မှာလည်း PING DOWN, Thunder Flood, IP Config ဆိုပြီး မတူတာလေးတွေရှိတယ်။) (ကိုယ်က တိုက်တော့မယ်ဆိုရင် Target ကို အမျိုးမျိုးလိုက်စမ်းရတယ်ဗျာ..ဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အချိန်ယူရတယ်။ ) (ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို။ တော်တော်လည်း သိလိုက်ရပါတယ်။ သိချင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ကျွန်တော် မျှဝေပေးလိုက်ဦးမယ် အစ်ကို။)
Posted by P Kyaw Swa at 3:30 AM
iPhone အတွက် Free Applications နှင့် Games များထည့်သွင်းနည်း
ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့အပျင်းတစ်နေလိုက်တာ Post တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ အရမ်းကြာသွားတယ်ဗျာ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ မို့တစ်ခါတစ်ရံ blog ဘက်မလှည့် နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်
ကဲ ဒီနေ့ တော့ရေးပီဗျာ.... ဒီ Post ကတော့ Jailbreak ဖြစ်ပြီးသား iPhone တွေ အတွက်ပဲနော် Firmware 3.1.2, 3.1.3 ပဲဖြစ်ဖြစ် Firemware အားလုံးနှင့် အကြုံးဝင်ပါတယ်။
Free App နှင့် Games များ ကို Full version အနေနဲ့ ရယူသွားနိုင်ရန် နည်းလမ်းလေးပါ။
ပထမဦးစွာ သင့်ရဲ့ iPhone(3G,3Gs) သည် Jailbreak လုပ်ပီးသား ဖြစ်ရပါမယ်၊ Jailbreak လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို ဒီမှာ (Firmware 3.1.2 , Firmware 3.1.3 ) ပြန်လည်ဖတ်ရှုပါ။
Jailbreak ဖြစ်ပြီးသား iPhone ရဲ့ Home Screen မှာ Cydia Application ရှိနေမှာပါ။
၁) Cydia ကို ဖွင့်ပါ (iPhone Home မှာရှိပါတယ်)
၂) Manage ----> Sources ကိုသွားပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 5:06 PM
ကျွန်တော်တို့ ဒီတစ်ခါ Right-click မှာ မိမိတို့ စိတ်ကြိုက်ထည့်မယ်ဖြုတ်မယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကိုသုံး
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ Right-click ကနေပြီးတော့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ မိမိ
တို့ မလိုချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကိုလည်း ဖျောက်ထားပေးနိုင်ပါတယ် ။ Keygen လေးမှာ Moo0 RightClicker ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးပြီး Generate လုပ်ပေးလိုက်ရင် သူ့အတွက် Key လေးရပါပြီ။ ဖိုင်
ဆိုဒ်ကလည်း 7.03 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာယူ
မူရင်း။ ။ နေမင်းမောင်
Posted by P Kyaw Swa at 3:45 AM
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ မှတ်တမ်း): iPhone.Backup.Extractor.v2.5.6.0
Iphone သုံးတဲ့သူများအတွက် လိုမယ်ထင်ပါတယ်
he iPhone Backup Extractor is an easy-to-use program to extract files from an iPhone, iPod Touch, iPhone 3G or iPhone 3G s iTunes backup. It is useful for restoring AppStore applications, SMS histories, contact lists, call histories, photographs and other data that might otherwise be inaccessible. The registered version can automatically convert the extracted Apple databases into CSV format, so they can be easily imported into Excel, Outlook, or Webmail.
Posted by P Kyaw Swa at 3:43 AM
ဒီနည်းကို ကျွန်တော်တွေ့တာ ကြာလှပြီ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတာ အဆင်မပြေလို့ မရေးဖြစ်တာ ။ နည်းလေးက မိုက်လို့ ကျွန်တော်မရရင်တောင် သူများတွေ ရမှာပါလို့ တွေးပြီး ရေးလိုက်တာ ။ ပထမဆုံး ဒီနေရာ က ဆောပ်ဝဲလ်ကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Run ပေးလိုက်ပါ ။ ပြီးရင်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ Bluetooth ချိတ်ပြီး သုံးရုံပါပဲဗျာ ။
တွေ့တယ်နော် ။ ကလိသာကလိလိုက် ။ အဆင်ပြေပါစေ ။
Source : December Mg Mg
Posted by P Kyaw Swa at 7:31 PM
1.) Download Firefox 7.0 for non installation: FTP downloading.
Just download and extract firefox-7.0.tar.bz2, and then click the file to launch Firefox 7.0
2.) Ubuntu 10.04 and 10.10 user can install Firefox7from firefox-stable/ppa by running following commands:
3.) Ubuntu 11.10 user can upgrade from default installed Firefox7beta via update-manager or by running:
I’m running Ubuntu Oneiric beta, I don’t know If Firefox7is available in Ubuntu 11.04 Natty’s universe repository. So tell me how if you installed Firefox7final in Natty.
Posted by P Kyaw Swa at 7:19 PM
Huawei C8600 ကို Android version 2.3.5 သို့အလွယ်ဆုံး version မြှင့်တင်နည်း
Huawei C8600 ကို Android version 2.3.5 ကိုမြှင့်ကြည့်ကြရအောင်။
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို version မြှင့်တင်ရာမှာ သမရိုးကျလုပ်နည်းနဲ့ volume up နဲ့ ဘယ်ခလုတ်ကို တွဲနှိပ်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
သာမန် user တစ်ယောက်အနေနဲ့က အဲဒီနည်းမျိုးနဲ့ဆို အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ အခု ပြောမယ့်နည်းက အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံးပါပဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ applicatin တွေဖြစ်တဲ့ Rom Manager Premium v4.4.0.7 နဲ့ recovery-clockwork-4.0.1.5-ascend2 ကို အရင်ဆုံး download လုပ်ပါ။
Rom Manager Premium v4.4.0.7 အားရယူရန်
Android 2.3.5 update for Huawei C8600 အားရယူရန်
ပြီးရင် recovery-clockwork-4.0.1.5-ascend2 ဖိုင်နဲ့ Android 2.3.4 update ကို ဖုန်းရဲ့ SD card ထဲကို copy ကူးထည့်ထားပါ။ (Android 2.3.4 update ဖိုင်က zip ဖိုင်လေးပါ။ အဲဒီဖိုင်ကို ဒီအတိုင်းပဲ SD card ထဲကိုထည့်ထားပါ။ ဖိုင်ကိုဖြည်စရာမလိုပါဘူး)။ Rom Manager Premium v4.4.0.7 ကိုတော့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ file manager ထဲကိုဝင်ပြီး ဖုန်းရဲ့ SD card ထဲကိုထည့်ထားတဲ့ recovery-clockwork-4.0.1.5-ascend2 ဖိုင်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ။
အဲဒီမှာ “Complete action using” Box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Rom Manager ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ။ (တကယ်လို့ ဒီအဆင့်မှာလုပ်မရဘူးဆိုရင် ဖုန်းကို 3G internet ဖွင့်ပြီး Rom manager ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ အဲဒိထဲက Flash ClockworkMod Recovery ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး download လုပ်လိုက်ပါ။ download လုပ်ရာမှာ ဖုန်း model ရွေးခိုင်းရင် Huawei Ascend ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါပြီးရင် အောက်မှာကျန်တဲ့ Backup လုပ်တဲ့အဆင့်နဲ့ Rom update လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုသွားလို့ရပါပြီ)
အဲဒီမှာ “ROM Pre-Installation” Box လေးပေါ်လာရင် အဲဒီထဲက “Wipe Dalvik Cache” ဆိုရွေးပေးပြီး ok နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ။
အဲဒီမှာ ဖုန်းက auto reboot ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ လက်ရှိတင်ထားတဲ့ ROM ကို Backup လုပ်ထားရပါမယ် ။ ခုနကသွင်းထားတဲ့ Rom Manager Premium v4.4.0.7 ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Backup Current ROM ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ။
ဖုန်းက auto reboot ဖြစ်သွားပြီး Backup လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် Rom Manager Premium v4.4.0.7 ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Install ROM from SD Card ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ။
အဲဒီထဲကနေ ခုနက SD card ထဲကို copy ကူးထည့်ထားတဲ့ Android 2.3.4 update ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ဖုန်းက Android version အသစ်ကို တင်ပါလိမ့်မယ်။ ၅မိနစ်ခန့်ကြာပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းက reboot ပြန်တက်လာပြီး Android version 2.3.4 ကို တင်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by P Kyaw Swa at 4:53 PM
iPhone, iPad နှင့် Apple ထုတ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိလာမယ်ဆိုရင်.....
Welcome To Myanmar Mobile Application Store(MMAS)
ကြေညာချက် နောက်ဆုံးထွက်iphone applicationများ ၊ Android ဖုန်း application များ ၊ ipad , ipod touch နှင့် Android Tablet application များ ကို တစ်နေရာတည်းမှာ free download ရယူနိုင်ကြပါပြီ။
Site နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက myanmarmobileapp@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
To visitors မိမိတို့တွင် ရှိသော application များအား Myanmar Mobile Application Store ပေါ်တွင်တင်လိုပါက myanmarmobileapp@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Myanmar Mobile Application Store
Posted by P Kyaw Swa at 4:42 PM
နာမည်ကြီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Angry Bird ဂိမ်းရဲ့ အသစ်ထွက် version “Angry Birds Seasons HD v1.3.0″ ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ငှက်ကလေးတွေကို လှောင်အိမ်ထဲကနေလွတ်အောင် လေးခွနဲ့ အမျိုးမျိုးပစ်ရတဲ့ ဂိမ်းလေးပေါ့။ level တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုပါ။
Angry Birds Seasons HD v1.3.0 ဂိမ်းအားရယူရန်
Posted by P Kyaw Swa at 4:33 PM
Hacking လို့အော်သံတွေမကြာမကြာကြားနေရလို့ ..စိတ်ဝင်စားရင်...
ကျနော့်ကို ဒီနစ်လေး ဟတ်ပေးပါတို့၊ ဒီဝဘ်လေး ဟတ်လို့ရမလား တို့ လာလာမေးသူများအတွက် သွားရောက်ဆက်သွယ် ကြပါကုန် ….. (Hacking နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကျနော်မျိုးစုံအောင် ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ မိမိဘာသာ စဉ်းစား တွေးတောပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကျနော်ပေးတဲ့လင့်ဆိုပြီး အပြည့်အ၀ယုံကြည်မနေပါနဲ့။ ကျနော်နဲ့ မည်သို့မျှ မပါတ်သတ်သော လင့်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးလည်း ရှိပါလားလို့ သိသွားအောင် ပြောပြတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလင့်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများအားလုံးကျနော်နှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ပါ)
သွားကြည့်လိုက်ပါဗျာ..လင့်က ဒီမှာ ပါ....နည်းပညာဗဟုသုတ တိုးပွားနိုင်ကြပါစေဗျာ....
Posted by P Kyaw Swa at 12:22 PM